Ọkachamara Semalt: Idozi Esemokwu nke Onwe Referrals Na Google Analytics
Mgbe ụfọdụ, ngalaba nwere ike ịpụta na akụkọ Google Analytics dị ka akụkụ nke okporo ụzọ. Ọ bụ nsogbu ndị mmepe chọrọ idozi dị ka ọ nwere ike ime ka nsogbu na ịkọ akụkọ ma nye data a na-apụghị ịdabere na ya. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị ekpochapụ okwu onwe onye, ​​ọ nwere ike iduga data nke nwere ike ịkpata mkpebi ikpe na-ezighi ezi maka mkpọsaahịa ahịa - open wardrobes australia. Na mgbakwunye na nke a, ọ gaghị ekwe omume ịnweta ikike ahịa nke nyere aka mee ka ọnụ ọgụgụ ntụgharị maka saịtị ahụ dị.
N'ọtụtụ ọnọdụ, nsogbu ahụ kpatara n'ihi nkwụsị nke Google Analytics iji hazie ya n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ mmejọ nke onye nwe ya na mgbatị ahụ.
Jack Miller, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ndị Nlekọta nke Ọkachamara , kọwaa ebe a na - akpata ihe na otu esi edozi ha. Ọzọkwa, ọ na-enye nhazi nchịkọta zuru ụwa ọnụ 'na njedebe iji belata ọnụ ọgụgụ nke onwe-referrals na saịtị ahụ.
Ụgbọ okporo ụzọ bụ akụkụ nke okporo ụzọ nke rutere saịtị site na isi iyi ọzọ. O nwere ike ịbụ na njikọ site na mpaghara ọzọ. Njikọ ahụ ekwesịghị inwe nsụgharị mgbasa ozi ma ọ bụghị ya ga-ekwu dị ka spam na-ezo aka. N'adịghị ka spam, nchịkọta na-akpaghị aka chọpụta ebe spam si abịa ma gosipụta aha nke ngalaba ndị na - ekepụta ya.
Mwepụ site na weebụsaịtị nwere ike karịa ihe ọtụtụ ndị na-eche. Iji jide n'aka na onye na-ekpuchi ihe niile, ịme ihe ga-abụ ihe kacha mma ịme. Ntugharị redirect redirect na-ejikarị aka ma na-emekarị ka ndị na-akpọ onwe gị.
2. Peeji nke na-efu Usoro Ntugharị
Ọ bụrụ na ndị mmadụ echefu iji kọwaa ibe ha, ọ ga-esi ike ịgbaso ha..Nsonaazụ bụ ndị mmadụ chọtara ngalaba ha na ibe akụkọ.
Ndozi: mgbe niile jide n'aka na itinye koodu ncheta na ibe niile na saịtị. Ọ bụrụ na onye amaghị ọkwa ọnọdụ nke saịtị ahụ, Onye Nlekọta Akara ahụ ga - abịa na njedebe.
3. Ejiri Ikike Iche Ozi Kuki
Cookies Universal Analytics kwesịrị itinye n'ọrụ mgbe ị na-awụli n'etiti ibe. Ọ bụrụ na otu ibe daa kuki maka ihe ụfọdụ, nnọkọ ahụ na-akwụsị. N'ihi ya, kuki ọhụrụ malitere ịmepụta nnọkọ ọhụrụ. Onye kwesiri ijide n'aka na ha nyochaa akwukwo ozo nile na-acho ebe ndi mmadu na-agwa onwe ha na-amalite iji ihe ndi ozo.
Idozi: Gaa na ibe iji mara ebe esemokwu ahụ malitere na ihe kpatara ya. Ozugbo onye mmepụta maara ihe kpatara nsogbu ahụ, ọ na-adịrị mfe iji dozie ya. Ọ bụrụ na idozi dị mfe, mgbe ahụ gaa n'ihu ma dozie ya. Ọ bụrụ na o siri ike, onye kwesịrị itinye aka na onye mmepe chọrọ ịma nke ọma mkpa ọ dị idozi nsogbu ahụ ma hapụ ha ka ha dozie ya.
Ụlọ ọrụ ụfọdụ nwere ike ịnweta ọtụtụ ngalaba, ha na-enwetakwa mkpa ijikọ ọrụ ndị ọbịa na ọtụtụ n'ime ha. Ọ bụrụ na emere ha n'ụzọ dị irè, ha kwesịrị ijide n'aka na kuki mbụ ahụ na-anọgide na-adịgide adịgide. Ịnweta njikọ ndị a na nkà na ụzụ bụ ụzọ aga.
Idozi: Gbaa mbọ hụ na kuki niile nọgidere na-aga n'ihu ngalaba.
5. Oge Ụgha Oge Oge
Mgbe nnọkọ ga-agwụ mgbe oge enyere, oge ọhụrụ ga-amalite. Ekwenyere na ịmepụta okporo ụzọ okporo ụzọ.
Gụnye: Otu nwere ike ịtọ oge maka oge dị elu ma hụ mmetụta ọ nwere na ndị na-akpọ onwe ya.
Ndepụta aha ntinye aha na-enyere aka dozie okwu nke onwe-referral ozugbo.